I-ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines abavelisi, abaxhasi - China ASTM Inch Hydraulic Butt Fusion Machines Factory
12 ~ 24 intshi lempundu umatshini fusion
Ukusetyenziswa kunye neMpawu ► Ukulungele ukuwelda umbhobho weplastiki kunye nokufakwa okwenziwe ngezinto ze-PE, PP kunye nePVDF. ►Iqukethe isakhelo esisiseko, iyunithi ye-hydraulic, isixhobo sokucwangcisa, ipleyiti yokufudumeza, ibhasikiti kunye nezinto ozikhethayo. ► I-PTFE esuswayo ishushu yokufudumeza ipleyiti eneenkqubo zokulawula ubushushu ezichanekileyo. ►Uxinzelelo oluphantsi lokuqalisa luqinisekisa ukuthembela okuthembekileyo kwemibhobho emincinci. ►Isikhundla esitshintshileyo se-welding senza ukuba kufakelwe izinto ezahlukeneyo ngokulula. ► Imitha yoxinzelelo oluchanekileyo noluchanekileyo ...
24 ~ 36 intshi lempundu umatshini fusion
Ukusetyenziswa kunye neMpawu ► Ukulungele ukuwelda imibhobho yeplastiki kunye nokufakwa okwenziwe ngezinto ze-PE, PP kunye nePVDF. ►Iqukethe isakhelo esisiseko, iyunithi ye-hydraulic, isixhobo sokucwangcisa, ipleyiti yokufudumeza, ibhasikiti kunye nezinto ozikhethayo. ► I-PTFE esuswayo ishushu yokufudumeza ipleyiti eneenkqubo zokulawula ubushushu ezichanekileyo. ►Uxinzelelo oluphantsi lokuqalisa luqinisekisa ukuthembela okuthembekileyo kwemibhobho emincinci. ►Isikhundla esitshintshileyo se-welding senza ukuba kufakelwe izixhobo ezahlukeneyo ngokulula. ► Ukuchaneka okuphezulu kunye nokuxakeka koxinzelelo ...
24 ~ 48 intshi butt umatshini fusion
2 ~ 6 intshi lempundu umatshini fusion
8 ~ 18 intshi lempundu umatshini fusion
4 ~ 12 intshi lempundu umatshini fusion